Uncategorized Archives - hamrohealth
काठमाडौं – सरकारले सबै निकायका संगठन संरचना र दरबन्दी पुनरावलोकन गर्ने भएको छ। कर्मचारी समायोजनपूर्व निर्धारण गरिएको संगठन संरचना र दरबन्दी वस्तुनिष्ठ नभएको भन्दै सरकारले दरबन्दी पुनरावलोकन थालेको हो। सरकारका विभिन्न मन्त्रालय र माताहतका निकायको संगठन संरचना र दरबन्दी व्यवहारिक नभएको भन्दै सरकारले संगठन संरचना र दरबन्दी पुनरावलोकन गर्नका लगि संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्ने भएको छ। कर्मचारीतन्त्रलाई व्यवस्थित बनाउन भन्दै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कार्यविधि तयार पारि मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको छ।undefined
यसअघि २०७४ सालमा कर्मचारी समायोजनपूर्व संगठन संरचना र दरवन्दी निर्धारण गर्दा हतार भएको, संघीय सरकारअन्र्तगत रहने संगठन तथा दरबन्दी अपेक्षित रूपमा वस्तुनिष्ठ र वैज्ञानिक बनाउन नसकिएकाले पुनरावलोकन थालिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
अब यो कार्यविधि पारित भएसँगै संघीय सरकार माताहतका निकायलाई जिम्मेवार बनाउने, श्रेणी तह र संगठनविच तालमेल ल्याउने, अनावश्यक कार्यालय र कर्मचारी दरबन्दी कटौती गर्ने, प्रशासनिक खर्च कटौती गर्नेलगायतका काम हुनेछन्। जसमा कर्मचारीले हप्तामा ४० घन्टा काम गर्नुपर्ने र ४० घन्टा कार्यवोझ देखिएमा मात्रै दरबन्दी थप हुनेसमेत कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार अब केही दिनभित्रै कार्यविधि स्वीकृत भई सरकारका सबै निकायको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण हुनेछन्। त्यसपछि अनावश्यक कार्यालय र कर्मचारी कटौती गर्ने, व्यावहारिक संगठन संरचना र दरबन्दी निर्धारण गरिने मन्त्रालयका एक सहसचिवले बताए। ‘अहिले कुनै ठाउँमा कार्यबोझ भयो, कर्मचारी भएनन्, कतै कर्मचारी छन्, त्यो निकाय आवश्यक नै नभएको महसुस भएको छ,’ उनले भने, ‘अब संगठन संरचना र दरबन्दी पुनरावलोकन गरी सार्वजनिक निकाय र कर्मचारीलाई व्यावहारिक बनाइनेछ।’ source nagarik news
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले फर्जी रिपोर्ट बनाएर स्वास्थ्यका कर्मचारीहरू संघमा समायोजन भएको भन्दै चासो देखाएको छ । फर्जी रिपोर्ट बनाएर केही कर्मचारी संघमै समायोजन र पदस्थापन भएको भन्दै उजुरी परेपछि अख्तियारले चासो देखाएको हो ।
अख्तियारका प्रवक्ता प्रदीपकुमार कोइरालाले उजुरीमाथि छानबिन भइरहेको र दोषी ठहरिए कारबाहीको दायरामा ल्याइने बताए । ‘फर्जी रिपोर्ट बनाएर केही कर्मचारी संघमै समायोजन र पदस्थापन भएको भन्दै उजुरी परेको छ, अनुसन्धानमा दोषी ठहरिए कारबाहीको दायरामा ल्याउने छौं,’ प्रवक्ता कोइरालाले भने ।
फर्जी रिपोर्टका आधारमा संघमै समायोजन र पदस्थापन हुनेहरूमा वीर अस्पतालमा कार्यरत कर्मचारीहरू अरुण महतो, टीकाराम पनेरु, जीवन श्रेष्ठ, युवराज सुवेदीलगायत रहेका छन् ।
यस्तै, वीर अस्पतालमा कार्यरत डिल्ली खनाल, डिल्ली आचार्य, सविता जोशी, युवराज सुवेदीले पनि रोगी भएको भन्दै रिपोर्ट पेस गरेको पाइएको छ । यी सबै अहेबका रूपमा कार्यरत छन् ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता महेन्द्र श्रेष्ठले नियुक्त हुँदा निरोगिताको प्रमाणपत्र पेस गरेर फेरि बोर्डमार्फत नै रोगीको प्रमाणपत्र पेस गर्नु अनुसन्धानको विषय भएको बताए । ‘एक वर्ष अगाडि नियुक्त हुँदा निरोगिताको प्रमाणपत्र पेस गर्ने र त्यही व्यक्तिले अहिले आएर बोर्डको सिफारिसमा रोगी भएको प्रमाणपत्र पेस गर्ने, यस्तो पनि हुन्छ र ? यो विषयमा छानबिन जरुरी छ ।’
स्वास्थ्य मन्त्रालयले समायोजनको सूचना प्रकाशित गरेसँगै कर्मचारीले आफ्नो नजिक रहेका चिकित्सकको रिपोर्टका आधारमा मेडिकल बोर्डको सिफारिसमा त्यस्तो काम गरेको पाइएको छ ।
स्रोतका अनुसार स्वास्थ्यअन्तर्गत समायोजनमा समस्या आएपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले गुनासो गर्ने समय दिएको थियो । यसपछि वीर अस्पतालका केही स्वास्थ्यकर्मीले फर्जी रिपोर्ट बनाएर पेस गरेका हुन् ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत समायोजनको सूची सार्वजनिक भएपछि वीरका अधिकांश कर्मचारीले बिरामी भएको भन्दै मेडिकल बोर्डमार्फत स्वास्थ्य मन्त्रालयमा विवरण पेस गरेका थिए । मेडिकल बोर्डले दिएको सिफारिसबारे पनि छानबिन भइरहेको अख्तियारले जनाएको छ ।
एक वर्षअगाडि नियुक्त हुँदा निरोगिताको प्रमाणपत्र पेस गरेका छन् । अहिले आएर बोर्डको सिफारिसमा कसरी रोगी भए ? नियुक्त हुँदा निरोगी प्रमाणपत्र पेस गरेर फेरि बोर्डमार्फत रोगीको प्रमाणपत्र पेस हुनु अनुसन्धानको विषय हो
महेन्द्र श्रेष्ठ, प्रवक्ता, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय
फर्जी रिपोर्ट बनाएर केही कर्मचारी संघमै समायोजन र पदस्थापन भएको भन्दै उजुरी परेको छ, अनुसन्धानमा दोषी ठहरिए कारबाहीको दायरामा ल्याउनेछौं
कर्मचारी र चिकित्सकको मिलोमतोमा तयार पारिएका रिपोर्टहरू मेडिकल बोर्डले पनि फटाफट सदर गरेको देखिएको छ । हालसम्म मेडिकल बोर्डबाट सिफारिस भएकै आधारमा ६० बढी कर्मचारीको समायोजन भइसकेको छ ।
निजामती सेवा नियमावली २०५० अनुसार कडा रोग भन्नाले मिर्गौला, मुटु र क्यान्सरसम्बन्धी रोगलाई जनाउँछ । तर, अस्पतालमा कार्यरत केही कर्मचारीको उच्च रक्तचाप, ढाडको दुखाइ, बाथजस्ता रोग भनी सिफारिस गरिएको छ । ती व्यक्ति प्रायः बोर्ड र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका पदाधिकारीनिकट रहेको बुझिएको छ ।
अस्पतालमा कार्यरत अहेब अरुणकुमार महतोलाई जनरल फिजिसियनले सिफारिस गरेको पाइएको छ । सिफारिसमा महतोलाई थाइराइडको समस्या, घाँटीनेर ढाड खिइएको, उच्च रक्तचाप र पित्तथैलीमा गिर्खा भएको देखाइएको छ । सोसम्बन्धी इन्डोक्राइनोलोजिस्ट, अर्थोपेडिक सर्जन, फिजिसियन र सर्जनले हेर्नुपर्ने हुन्छ । तर, महतोलाई असम्बन्धित डाक्टरले दिएको रिपोर्टलाई आधार मानेर बिरामी भएको सिफारिस बोर्डले गरेको छ ।
बोर्डले तयार पारेको सिफारिसमा महतोलाई सर्भिकल स्पोनडायलोसिस, एचटीएन, हाइपोथाइरोइडिज्म मल्टिपल जिबिपोलिप्स भएकाले सम्बन्धित विशेषज्ञ डा. संजयकुमार ठाकुरले सुविधा सम्पन्न ठाउँमा बिरामीको नियमित फलोअप तथा उपचार गर्ने गरेको उल्लेख छ ।
स्रोतका अनुसार महतो स्वास्थ्य राज्यमन्त्री डा. सुरेन्द्रकुमार यादव निकट हुन् । उनी संघमै समायोजनमा परेका छन् । वीर अस्पतालका कन्सल्टेन्ट फिजिसियन डा. ठाकुरले रिपोर्टका आधारमा आफूले चेकजाँच गरेको बताए । उनले भने, ‘मैले उहाँलाई नियमित फलोअपमा पनि आउन भनेको छु । ’
यस्तै, अस्पतालमा कार्यरत अहेब टीकाराम पनेरूलाई बोर्डले ढाड दुख्ने समस्या भएको देखाएर संघकै फाजिलमा सरुवा गरिएको छ । उनी खेलाडीसमेत हुन् । तर, ढाड खिइएको भन्दै बोर्डले सिफारिस दिएको छ । धेरैबेरसम्म हिँड्न र उभिन नहुने भनेर सिफारिस गरिएको छ । स्रोतका अनुसार पनेरू सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा गठन भएको तत्कालीन समायोजन महाशाखाका प्रमुख केदार पनेरूका नातेदार हुन् ।
यस्तै, अस्पतालमा कार्यरत अहेब युवराज सुवेदीलाई बोर्डले ढाड दुख्ने समस्या भएको देखाएको छ । यही रिपोर्टका आधारमा उनलाई संघकै फाजिलमा पदस्थापन र समायोजन गरिएको हो । फर्जी रिपोर्ट बनाएको प्रमाणित भए डाक्टरको प्रमाणपत्र रद्ध गर्ने अधिकार नेपाल मेडिकल काउन्सिललाई छ ।
यसैगरी, अस्पतालमा कार्यरत अहेब जीवन श्रेष्ठलाई बोर्डले ढाड दुख्ने समस्या भएको देखाएको छ । यसैलाई आधार बनाएर उनलाई संघकै फाजिलमा पदस्थापन र समायोजन गरिएको छ ।
कर्मचारी समायोजन ऐनको दफा ८ को उपदफा ४ मा प्रचलित कानुनले निर्धारण गरेको कडा रोग लागेको वा शारीरिक रूपमा अशक्त व्यक्तिले रोजेको ठाउँमा समायोजन हुन पाउने उल्लेख छ ।
नेपाल सरकारले गठन गरेको मेडिकल बोर्डले प्रमाणित गरेपछि मन्त्रालयले कर्मचारीलाई चाहेको स्थानमा समायोजन गर्ने व्यवस्था छ ।
सो दफालाई दुरुपयोग गर्दै वीर अस्पतालका १२ बढी कर्मचारी मेडिकल बोर्डबाट कडा रोग भनी सिफारिस बनाउँदै समायोजनमा पर्न सफल भएका हुन् । मेडिकल बोर्डको अध्यक्षमा अस्पतालका निर्देशक डा. केदारप्रसाद सेन्चुरी, सदस्यहरूमा प्राडा विद्यानिधि न्यौपाने र प्राडा किरण श्रेष्ठ रहेका छन् ।
अब निजामती कर्मचारीहरुले सामूहिक राजीनामा दिए सरकारले स्वीकृत गर्ने
काठमाडौं । निजामती कर्मचारीहरुले सामूहिक राजीनामा दिए सरकारले स्वीकृत गर्ने कानुनी व्यवस्था हुने भएको छ ।
संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्तसम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा यस्तो व्यवस्था राख्ने सहमति भएको हो । विधेयकको दफा १२१ मा बिभिन्न कारणले निजामती सेवाका कर्मचारीहरुले सामूहिक राजीनामा दिए सरकारले स्वीकृत गर्नसक्ने व्यवस्था छ ।
बुधबारको राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्तसम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा छलफल भएको थियो ।
समायोजन अपडेट: स्टाफ नर्सको पत्र तयार गर्दै।
काठमाडौँ, १७ साउन । निकै ढिलो शुरु भएको स्वास्थ्यको कर्मचारी समायोजनले पछिल्लो समय गति लिदै छ । कुल २७ हजार बढी कर्मचारी भएको स्वास्थ्यमा अहिलेसम्म एक तिहाई अर्थात करीब ९ हजार कर्मचारीको समयोजन भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
समायोजनका लागि मन्त्रालयले ६ जनाको टोली बनाएको छ । सोही टोलीलाई सहयोग गर्न अर्को पाँच जनाको टोली छ । सहयोगी टोलीले भने समायोजन भएका व्यक्तिको पत्र तयार गरी डिस्प्याच गर्ने काम गर्दछ ।
शुक्रबार नेपाली हेल्थसंगको कुराकानीमा पत्र डिस्प्याच गर्ने कर्मचारीले अहिले स्टाफ नर्सको समायोजन पत्र डिसप्याच गर्न सुरु गरेको बताइन । स्रोत नेपाली हेल्थ
यसरी हुन्छ पत्र डिसप्याच
सिनियर डाक्टरको ‘दुर्व्यवहार’पछि डाक्टर पायलले गरिन् आत्महत्या, घटनामा संलग्न तीन जना डाक्टर पक्राउ
बिबिसी – मुम्बईको एक सरकारी अस्पतालमा विशेषज्ञ तह अध्ययनरत डाक्टर पायल तडवीले आत्महत्या गरेकी छिन्। डा पायलको परिवारले सिनियरले गरेको दुव्र्यवहार सहन नसकेर पायलले आत्महत्या गरेको आरोप लगाएका छन्।
उनको आत्महत्यापछि प्रहरीले तीन जना डाक्टरलाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ परेका डाक्टरसँग यो विषयमा अनुसन्धानको काम भइरहेको मुम्बई प्रहरीले जनाएको छ।
डा पायलले मे २२ तारिखमा आत्महत्या गरेकी थिइन्। उनकी आमा आबेदा तडबीले पक्राउ परेका तीन जना डाक्टरले छोरीलाई केही महिनादेखि दुःख दिँदै आइरहेको बताएकी छिन्।
मेडिकल कलेजका तीनजना वरिष्ठ आवासीय डाक्टरले उनीविरुद्ध जातीय विभेदका शब्दको प्रयोगको गरेको आरोप लागेको छ। जातीय विभेदलाई लिएर उनलाई दुर्व्य वहार गरेका थिए। परिवारले उनीहरुको दुर्व्यव्यवहारका कारण आजित भएर पायलले आत्महत्या गरेको दावी गरेका छन्।
मुम्बई प्रहरीले यो विषयमा नियन्त्रणमा लिएका तीन डाक्टरलाई अत्याचार विरोधी, र्‍यागिङ विरोध र सूचना प्रविधि ऐन अनुसार मुद्धा दर्ता गरेको छ।
प्रहरी नियन्त्रणमा रहेका डाक्टरहरुले भने अरोपको खन्डन गरेका छन्। उनीहरुले आवासिय चिकित्सकहरुको संस्थामार्फत यो विषयमा निष्पक्ष जाँच गर्न माग गरेका छन्।
उत्तरी महाराष्ट्रको जल गाउँकी पायल ताडावी टोपीवाला मेडिकल कलेजमा गाइनोकोलोजिष्ट अर्थात प्रसूति तथा स्त्री रोग विशेषज्ञ विषय पढिरहेकी थिइन्। आफ्नो पढाई पूरा गरिसकेपछि उनले आदिवासी क्षेत्रमा काम गर्ने सोच बनाएकी थिइन्।
उनले पश्चिम महाराष्ट्रको मीराज(सांगली मेडिकल कलेजबाट एमबिबिएस अध्ययन गरेकी थिइन्।
उनी पिछडिएकी वर्गकी भएका कारण उनले आरक्षण कोटामा भर्ना भएकी थिइन्।
कलेजका डिन डा रमेश भरमालका अनुसार घटनाको भोलिपल्ट नै एन्टी रैङ्गिग समितिले नियमानुसार अनुसन्धान सुरु गरिसकेको छ। समितिले २५ जनाको बयान समेत लिइसकेको छ।
पायलकी आमा आबेदा ताडावीले बीवाईएल नायर अस्पतालका डिनलाई यस सम्बन्धी लिखित उजुरी समेत दिएकी थिइन्। ‘म यसअघि नै उजुरी दिनेवाला थिएँ तर पायलले मलाई रोकेकी थिइन्, उसलाई डर थियो उनीहरुविरुद्ध उजुरी दियो भने आफूप्रति झन धेरै दुर्व्यवहार हुन्छ, जसका कारण मैले आफूलाई रोकेकी थिएँ’ उनले उजुरीमा लेखेकी छिन्।
गरीब र पिछडिएको परिवारबाट आएकी पायलले मेडिकल शिक्षामा सफलता हासिल गरिरहेकी थिइन्। आफ्नी छोरीप्रति गर्व महसुस भइरहेको आबेदाले बताएकी छिन्।
वरिष्ठ महिला डाक्टरहरुले बिरामीका अगाडि पायलको बेइज्जत गर्ने गरेको बताएकी छिन्। उनले भनिन्, ‘यसका कारण मेरी छोरीमाथि मानसिक दबाब परिरहेको थियो।’ आफ्नो मानसिक स्वास्थ्यलाई लिएर पायल चिन्तित भएको आबेदाले बताएकी छिन्। यतिमात्र नभएर पायलले आफ्नो विभाग समेत परिर्वतन गर्ने सोच बनाएकी थिइन्।
पायलका साथ काम गरिरहेका अन्य डाक्टरहरुले सोसल मिडियामा रिसले भरिएका गुनासा व्यक्त गर्नुका साथै अभियुक्त डाक्टरहरुविरुद्ध कडा कारवाहीको माग गरेका छन्।
स्वास्थ्यको बजेट ६८ अर्व ७८ करोड : के के कार्यक्रम परे ?
काठमाडौँ, १५ जेठ ।अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले आगामी आर्थिक बर्षका लागि बजेट पेश गरेका छन् । आज संसदको दुबै सदनको संयुक्त बैठकमा उनले आर्थिक बर्ष २०७६/ ७७ को सरकारको बजेट पेश गरेका हुन् ।
बजेटमा यसपटक स्वास्थ्यले ६८ अर्व ७८ करोड रुपैयाँ बजेट पाएको छ ।
यसपटक स्वास्थ्यको के – के विषय परयो ? अर्थमन्त्री डा. खतिवडाकै शव्दमा ….
देशभरका सबै सामुदायिक अस्पतालका छात्राहरुलाई सेनिटरी प्याड निशुल्क उपलव्ध गराउन आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु ।
विकासको साध्य र साधन दुबै नागरिक नै भएकोले सबै नागरिकलाई स्वस्थ बनाई उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्न र सबल मानव पूजि निर्माण गर्न स्वास्थ्य क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिई बजेट विनियोजन गरेको छु ।
आधारभुत स्वास्स्थ्य सेवालाई निशुल्क गर्दै आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गरिनेछ । स्वास्थ्य सेवालाई सर्भसुलभ र गुणस्तरीय बनाइने छ । स्थानीय तहका सेवा प्रदायक संस्था बाट प्रदान गरिने तोकिएका आधारभूत स्वास्थ्य सेवा भरपर्दो बनाइने छ ।
सबै नेपालीलाई स्वास्थ्य बिमाको दायरामा ल्याउने गरी कार्यक्रम तय गरिएको छ । स्वास्थ्य बिमाले समेटने आधारभूत उपचार सबै स्थानीय तहका स्वास्थ्यकेन्द्रबाट उपलव्ध गराइनेछ । विमितहरुलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्नका लागि न्युनतम गुणस्तर मानक निर्धारण गरिनेछ । मुलुकका सबै जिल्लामा स्वास्थ्य बिमा योजना सञ्चालन गर्न छ अर्व विनियोजन गरेको छु ।
महिलाहरुमा बढदो क्रममा रहेको सर्भाइकल तथा स्तनक्यान्सर जस्तो घातक रोग पहिचानका लागि निशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण, र सर्भाकल क्यान्सर विरुद्ध खोप कार्यक्रम सञ्चालन गर्न र सबै स्थानीय तहका स्वास्थ्य संस्थाबाट सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु ।
हरेक स्थानीय तहका वडास्तर देखि नै पूर्ण खोप सुनिश्चित गर्ने कार्यलाई अभियानको रुपमा गरिनेछ ।
विपन्न नागरिकका लागि आठ प्रकारका जटिल र असाध्य रोगको उपचारका लागि अनुदानमा बृद्धि गरी रु २ अर्व २० करोड पुरयाएको छु ।
क्यान्सर उच्चरक्तचाप र मधुमेहको जस्ता बढदो प्रबृत्तिका रोगहरुको रोकथाम र निदान कार्यक्रम गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु ।
आमा र बच्चाको पोषण सुनिश्चित गर्न गर्भावस्ता दे िखनै प्रसूति सुरक्षा सेवा पुरयाउइनेछ । यस अन्तरगर्त गर्भवती जाँच सेवा लिने र स्वास्थ्य संसथमा सुत्केरी हुनेका लागि प्रदान हुने यातायात खर्चका लागि रु २ अर्व २२ करोड विनियोजन गरेको छु ।
बाल स्वास्थ्य तथा पोषण कार्यक्रमका लागि रु ६ अर्व बिनियोजन गरेको छु ।
मुलुक भरका करीब ५२ हजार महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरुले स्वास्थ्य क्षेत्रमा पुरयाएको योगदानको कदर गर्दै उनीहरुको कार्यलाई थप प्रोत्साहन गर्न बार्षिक रुपमा उपलव्ध गराउदै आएको यातायात खर्च स्वरुप बार्षिक रु ३ हजारका दरले उपलव्ध गराउन रु १५ करोड विनियोजन गरेको छु ।
पश्चिम तराईमा रहेको सिकलसेल एनिमिया रोकथाम गर्न विशेष कार्यक्रमका लागि बजेट विनियोजन गरेको छु ।
क्षयरोग, एडस तथा यौन रोग र कुष्टरोग नियन्त्रण कार्यक्रमका लागि रु १ अर्व ८२ करोड विनियोजन गरेकोछु ।
स्थानीय तह प्रदेश र विभिन्न संघसंस्था स्वास्थ्य सेवाका कार्यक्रमहरुलाई साझेदारीमा सञ्चालन गर्न रु १ अर्व विनियोजन गरेकोछु ।
स्वास्थ्य पूर्वाधार नभएका स्थानीय तहहरुमा कम्तिमा एक प्राविधिक अस्पताल स्थापना गरी सबै स्थानीय तहमा न्युनतम १ चिकित्सकको व्यवस्था गरिनेछ ।
आधारभूत स्वास्थ्य सेवा स्थानीय तहका सबै वडाहरुमा उपलव्ध गराउन स्थानीय तहको लागत सहभागिता स्वास्थ्य संस्था निर्माण गर्न रु ५ अर्व विनियोजन गरेकोछु ।
निर्माणाधिन अस्पतालहरुरको भवन निर्माण सम्पन्न गर्न रु ५ अर्व ५७ करोड र १५ सैयाँको प्राथमिक अस्पताल स्तरोन्नती गर्न रु १ अर्व २६ करोड विनियोजन गरेको छु ।
सबै प्रदेशमा कम्तिमा एक अस्पतालबाट विशिष्टीकृत सेवा प्रदान गर्ने नीति अनुरुप कोशी अस्पताल भरतपुर अस्पताल,नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पताल,भेरी अञ्चल अस्पताल र डडेलधुरा उपक्षेत्रीय अस्पतालको स्तरोन्नती गर्न रु १ अर्व बिनियोजन गरेको छु ।
गण्डकी प्रदेशमा पश्चिमाञ्चल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पोखरा, कर्णाली प्रदेशमा क्षेत्रीय अस्पताल सुर्खेतबाट यस्तो सेवा उपलव्ध हुनेछ ।
राजविराजमा रामराजाप्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापना गर्न रु ४० करोड विनियोजन गरेको छु ।
मनमोहन कार्डियोभास्कुलर टान्सप्लान्ट सेन्टरको पूर्वाधार निर्माण, बाँकेको सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पताल सञ्चालमा ल्याउन, सिराहामा क्यान्सर अस्पताल निर्माण गरी विपी कोइरालाको विस्तारीय सेवा प्रदान गर्न र जिपी कोइराला राष्ट्रिय स्वास्वप्रस्वास केन्द्रको उपचार सेवा सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु ।
मानवअंग प्रत्यारोपण केन्द्र भक्तपुरमा मानवअंगको म्याचिङ टेष्ट स्थापना गर्न अनुदानको व्यवस्था मिलाएको छु ।
वीर अस्पताललाई अन्तराष्ट्रिय स्तरको विशिष्ठकृत सेवा सहितको उत्कृष्ठता केन्द्रको रुपमा विकास गरिनेछ ।
भक्तपुरको दुवाकोटमा बीर अस्पतालको सेवा विस्ताररका लागि आगामी आवमा विस्तृत अध्ययन सम्पन्न गरी आधुनिक भवनको निर्माण कार्य अघि बढाउन रु ४० करोड विनियोजन गरेकोछु ।
केन्द्रीय प्रयोगशालालाई अत्याधुनिक प्रविधियुक्त निदानकेन्द्रको रुपमा स्तरोन्नती गरिनेछ । तीन बर्ष भित्र सबै प्रदेशमा अत्याधुनिक निदान केन्द्रहरु सञ्चालनमा ल्याइनेछ ।
सम्वन्धीत प्रदेशसंगको लागत सहभागितामा पदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला सेवा सञ्चालनका लागि आवश्यक पूर्वाधारण निर्माण तथा जनशक्ति व्यवस्थापन गरिनेछ ।
आधुनिक चिकित्साका अलावा आयुर्वेदिक होमियोप्याथिक युनानी,अकुपेन्चर आम्ची र प्राकृतिक चिकित्सा जस्ता बैकल्पिक उपचार पद्धतीको अनुसन्धान विकास र उपयोगमा जोड दिइनेछ ।
प्राथमिक अस्पतालहरुमा टेलिमेडिसिन शिक्षा पद्धतीमार्फत २४ घण्टा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा उपलव्ध हुनेछ ।
स्वस्थ नागरिक स्वास्थ समाज स्वस्थ जीवन र त्यसका लागि स्वस्थ उत्पादन र स्वस्थ उपभोग गर्ने बानी विकास गर्न सामाजिक जागरण ल्याइनेछ ।
सार्वजनिक स्थल र सवारी साधनमा धूमपान र मध्यपान पूर्णरुपमा निशेध गरिनेछ ।
टोलटोलमा नागरिक आरोग्य कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
सबै स्थानीय तहका वडा स्वास्थ्य केन्द्र र तथा सामुदायिक माध्यमिक विद्यालयमा ब्रोडव्याण्ड इन्टरनेट विस्तार गर्ने कार्य आगामी आव भित्र सम्पन्न गरिनेछ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या क्षेत्रमा रु ६८ अर्व ७८ करोड विनियोजन गरेको छु ।